I-Ultrasound Emkhakheni Wezokudla - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ama-Ultrasonicator aphezulu Wokwenza Ukucutshungulwa Kokudla
Hielscher Ultrasonics’ Amaphrosesa we-ultrasonics wezezimboni kukhona ama-ultrasoniator asebenza kakhulu, angalawuleka ngokunembile futhi avumele imiphumela yemiphumela futhi ikhwalithi yomkhiqizo eqhubekayo. Ukukwazi ukuletha ama-amplopes aphezulu kakhulu, ama-Hielscher processors e-ultrasonic angasetshenziselwa izinhlelo zokusebenza ezifuna kakhulu. Amandla afinyelela ku-200µm angaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
Amakhasimende anelisekile ngokuqina okuqinile nokuthembeka kwezinhlelo zikaHielscher Ultrasonic. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher agijimela ngokuthembekile emikhakheni yokufaka isicelo esindayo, indawo efuna ngenkani ukusebenza kwe-24/7 futhi aqinisekise ukuthi ukucubungula kusebenza kahle nangokomnotho. Ukuqina kwenqubo ye-Ultrasonic kunciphisa isikhathi sokucubungula futhi kufinyelela imiphumela engcono, ie izinga eliphakeme, isivuno esiphakeme, imikhiqizo emisha.
Ngokusebenzisa okungaguquki kwezinto zokwenziwa ezikhethekile, njenge-titanium, insimbi engagqwali, i-ceramic noma ingilazi yamamaki ehlukene, ukuhambisana kwendlela nenqubo kuqinisekisiwe.
Ama-processor we-Ultrasonic ayimishini esebenza kalula futhi elula esebenza ngokulungiswa okuphansi futhi kuyindleko ephansi.
Ukusuka ekuhlolweni okusemandleni ukucubungula ukuthuthukiswa nokufakwa kwezimboni – Hielscher Ultrasonics ngumlingani wakho izinqubo ultrasonic yimpumelelo!
Ngabe i-Ultrasonics ekuSebenzeni Ukudla isebenza kanjani?
Ukulungiswa kokudla kwe-Ultrasonic kungubuchwepheshe obusungulwe kahle obusetshenziselwa ukufakwa kwezinhlelo zokusebenza njengokuxuba ne-homogenization, i-emulsation, isizinda, ukuncibilikisa, ukudambisa & ukukhethwa, inyama, uthando, ukusebenziseka ndawonye kanye nokuguqulwa kokuguqulwa kanye nemikhiqizo yokudla yokugcina. Kufakwe amashumi eminyaka izitshalo zokukhiqiza ukudla, ama-Hielscher ama-processor wokudla e-Hielscher ayindilinga futhi athuthukiswa ukuze ahlangabezane nezidingo zomkhakha. Ama-processor we-Ultrasonic asebenzisa amandla omzimba adalwe ngamagagasi e-ultrasound, okuphuma esizukulwaneni se-cavitation.
Kuyini i-Acoustic Cavitation?
I-acoustic cavitation, eyaziwa nangokuthi yi-ultrasonic cavitation, kungukukhula nokuwohloka kwama-bubu we-vacuum ngemizuzu ensimini ye-ultrasonic ekhiqizwa uketshezi noma i-slurries. Ama-bubble we-cavitation akhula ngesikhathi semijikelezo eshintshashintshashintshwayo ephezulu / yengcindezi ephansi, okuyizigaba zokucindezela nezokungajwayelekile ngokulandelana. Ngemuva kokukhula ngaphezulu kwemijikelezo yengcindezi eshintshashintshayo, ibhamuza le-vacuum lifinyelela iphuzu lapho lingakwazi ukudonsa khona amandla amaningi ukuze i-bubble ifakwe ngobudlova ngesikhathi somjikelezo wokucindezela okukhulu. Ngesikhathi sokuwa kwe-bubble, kwenzeka izimo ezibucayi bendawo kufaka phakathi amazinga okushisa aphakeme afinyelela ku-5,000K ngokushisa okuphezulu kakhulu kanye namazinga okupholisa, ingcindezi efinyelela ku-2000atm kanye nokwehluka kwengcindezi ehambisanayo, namajethi we-liquid afinyelela ku-280m / s velocity. Kulezi zingcweti “izindawo ezishisayo”, amandla endawo ngokweqile adala izimo zomzimba, okuholela ekuxubeni, ekukhipheni kanye nasekukhupheni okudluliselwa ngobuningi.
Ukulungiswa kokudla kwe-Ultrasonic kususelwa ku-acoustic cavitation kanye namandla ayo e-shemrrodynamic
Ukucubungula kwe-ultrasonic ekhoneni
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwama-botanicals nge-ultrasonicator UP400St